Der Ewige | Weltweite Kirche Gottes Schweiz | Weltweite Kirche Gottes Schweiz - Weltweite Kirche Gottes Schweiz
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းပြချက်မှာ ဘုရားသခင်သည် သုံးပါးတစ်ဆူဖြစ်တော်မူသည်—သုံးပါးတစ်ဆူနှင့် သုံးပါးတွင်တစ်ခုရှိသည်ဟူသော ကျမ်းစာအမြင်ဖြင့် ရုန်းကန်ရပေမည်။ ခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကို လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဟု အဘယ်ကြောင့်ခေါ်ကြသည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ တမန်တော်ပေါလုပင် ဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “လူအပေါင်းတို့သည် ဝန်ခံသကဲ့သို့၊ ယုံကြည်ခြင်း၏နက်နဲသောအရာသည် ကြီးမြတ်၏” (1. တိမောသေ 3,16).
သင်၏သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအယူဝါဒကိုမည်မျှပင်နားလည်ပါစေသင်သေချာစွာပြောနိုင်သည်မှာ - သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘုရားသည်ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အသက်တာ၏ကောင်းမွန်သောမိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းတွင်သင့်ကိုအမြဲတမ်းပါ ၀ င်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
ဘုရားသုံးပါးမကတစ်ပါးတည်းသာကိုးကွယ်ရာအရှင်၊ သမ္မာကျမ်းစာ၊ ဘုရားသခင့်တစ်ပါးတည်းသောဘုရားသခင်၊ ဖခင်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နေထိုင်ကြသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့မျှဝေသောဘ ၀ သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ပြည့်ဝစုံလင်သည်။ တစ်နည်းဆိုရလျှင်ခမည်းတော်နှင့်သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်သီးခြားဖြစ်သောအရာမရှိပါ။ ခမည်းတော်နှင့်သားတော်ကိုခွဲ ထား၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရှိ။
ဆိုလိုသည်မှာ if သင်သည်ခရစ်တော်၌ရှိလျှင်သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘုရား၏အသက်တာနှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းနှင့် ၀ မ်းမြောက်ခြင်း၌ပါ ၀ င်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာခမည်းတော်သည်သင့်ကိုလက်ခံပြီးယေရှုနှင့်အတူသူနှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်၏လူ့ဇာတိခံယူခြင်း၌ဘုရားသခင်နှင့်တကြိမ်လုံးပြခဲ့သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ခမည်းတော်အပေါ်၌ထားသောခမည်းတော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အစဉ်အမြဲရှိလိမ့်မည်။
ဆိုလိုသည်မှာခရစ်တော်၌ဘုရားသခင်ကသင်သည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည်၊ သင်ပါဝင်သည်၊ သင်အရေးကိစ္စရှိသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘ ၀ တစ်ခုလုံးသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သင့်အပေါ်၌ရှိသောဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်သင့်အတွင်း၌ရှိသောဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုက “သင်တို့သည် အချင်းချင်းချစ်ကြသောအခါ၌ သင်တို့သည် ငါ၏တပည့်ဖြစ်ကြောင်းကို လူအပေါင်းတို့သည် သိကြလိမ့်မည်” (ယော ၁။3,35) ခမည်းတော်နှင့် သားတော်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သင့်အထဲ၌ အသက်ရှင်နေသောကြောင့် သင်သည် ခရစ်တော်၌ရှိစဉ် အခြားသူများကို ချစ်သည်။ ခရစ်တော်၌ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ မာနနှင့် မုန်းတီးခြင်းမှ ကင်းလွတ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ အသက်တာကို ခံစားခွင့် မပြုဘဲ ဘုရားသခင် သင့်အား ချစ်သည့်ပုံစံအတိုင်း အခြားသူများကို ချစ်ရန် လွတ်လပ်စွာ ချစ်ခွင့်ရှိသည်။
ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာခမည်းတော်၏သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ရပ်လည်းမဟုတ်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်နှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၌ပါ ၀ င်ရန်မပြတ်တမ်းတာဝန်ယူထားသောခမည်းတော်၏မပြောင်းလဲသောအလိုတော်အားဖြင့်ရရှိသည်။ ငါတို့အဘို့အလိုငှါလူသားဖြစ်သောသားတော်ကိုခမည်းတော်သည်စေလွှတ်တော်မူ။ ၊ သူသည်မွေးဖွားခြင်း၊ အသေခံခြင်း၊ သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းသို့ ရောက်၍ ခမည်းတော်၏လက်ျာတော်ဘက်၌သခင်ယေရှု၊ ရွေးနုတ်ရှင်နှင့်ဖျန်ဖြေသူအဖြစ်ကောင်းကင်သို့တက်ကြွခဲ့သည်။ ငါတို့ထံမှလာသောအပြစ်များကိုဆေးကြောပြီ။ ထို့နောက်ထာဝရအသက်၌အသင်းတော်ကိုသန့်ရှင်းမြင့်မြတ်စေရန်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ကယ်တင်ခြင်းသည်ခမည်းတော်၏ထာဝရသစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်တန်ခိုးတော်၏တိုက်ရိုက်ရလဒ်ဖြစ်ပြီးယေရှုခရစ်ကပြတ်ပြတ်သားသားပြသခဲ့ပြီးသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးခဲ့သည်။ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းမဟုတ်။ ဘုရားသခင်တပါးတည်းသာလျှင်ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင့်ကိုကယ်တင်တော်မူသည်။ ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသူဟာဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်သူကသင်ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ကလေးတစ်ယောက်လိုအမှန်တရားကိုမျက်စိဖွင့်ဖို့လက်ဆောင်တစ်ခုအနေနဲ့သင့်ကိုယုံကြည်ခြင်းပေးသလဲ။